Xog: Ka hor shirka London, wax ka ogow Soma Oil and Gas iyo qandaraaska shidaalka dalka Soomaaliya - Caasimada Online
Home Warar Xog: Ka hor shirka London, wax ka ogow Soma Oil and Gas...
Xog: Ka hor shirka London, wax ka ogow Soma Oil and Gas iyo qandaraaska shidaalka dalka Soomaaliya
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, waxaa ay Febraayo 7, 2019-ka, bixin-doontaa qandaraas balook- yo dhan 206 oo ku saabsan baarista shidaalka ku jira xeebaha koonfurta Soomaaliya, shirka waxaa uu ka dhici-doonaa London.
Qormadan waxaan ku baareynaa shirkadda Soma Oil and Gas oo qeyb ka ah qandaraasyada faa’ido iyo khasaaro.
Si ay waajibaad keeda uga soo baxdo, Soma Oil and Gas waxay ka gadatay shirkadda CGG xogaha duugga ah oo waayahii hore la soo uruuriyay. Waxay kaloo keensatay shirkadda RPS oo qiimaynta dhulka iyo badda iyo sida shidaal looga heli karo u sammaysay. Ugu dambayn, shirkadda Soma Oil and Gas waxay la timid shirkad u sammaysa Saysmikada badda oo lagu magacaabo SeaBird oo waddanka China laga lahaa. Shirkadahaas 3da ah ayaa Soma Oil and Gas shaqada u qabtay.